Onyinye Planet 2021: ihe kachasị ọhụrụ na ihe ọhụrụ na akụkọ ntolite niile. Akwụkwọ ugbu a
Onyinye mbara ala
N'ime nnukwu osimiri nwere aha 654, ndị juri 2021 Planet Prize họpụtara thriller akụkọ ihe mere eme Obodo oku —Sy Sergio López (pseudonym) - dị ka ọrụ mmeri nke nde euro nke mbipụta 70 nke asọmpi a ma ama. Akwụkwọ akụkọ nke enyere ọnọdụ ikpeazụ bụ Ofmụ iwe - Yuri Zhivago (pseudonym) - na ego nrite ya bụ narị euro abụọ.
National Art Museum nke Catalonia jere ozi dị ka ntọala - ya na ndị eze Spain dị ka ndị akaebe - maka mgbede na -adịghị ahụkebe nke emume nturu ugo, nke kacha ọhụrụ na akụkọ ntolite ya. Ọ bụghị naanị nwanyị na -adịghị adị meriri ihe nrịba ama nke Planet 2021, mana nke a, nke ụmụ nwoke atọ mejupụtara. Dịkwa ka a ga -asị na nke a ezughị, n'ime awa ole tupu nnyefe ya, ọnụego asọmpi sitere na 601.000 ruo 1 nde euro, nke mere ka ọ bụrụ asọmpi akwụkwọ kacha baa ọgaranya na akụkọ ntolite - na -enweta ihe nrite Nobel site na euro 10.
1 Ndị mmeri: Uche dị n'azụ onye na -ede akwụkwọ kacha mma Carmen Mola
2 Banyere ndị dere Carmen Mola
3 Otu onye ikpeazụ na -emeri
4 Ndị juri nke mbipụta 70 nke ihe nrite Planeta
5 Esemokwu dị n'ime ụwa nke akwụkwọ nwanyị tupu mkpughe nke njirimara Carmen Mola
Ndị mmeri: Uche dị n'azụ onye na -ede akwụkwọ kacha mma Carmen Mola
Ruo afọ anọ ugbu a, aha Carmen Mola nọ na -ada ụda - ma na -aga n'ihu - n'ime akwụkwọ ọgụgụ. Ma ọ bụghị maka obere, Ọ bụ maka onye ode akwụkwọ nke kpebiri ka a ghara ịma aha ya n'agbanyeghị na o rerela ihe karịrị narị puku anọ ya na trilogy ya Nwanyị gypsy. Agbanyeghị, ihe omimi niile na-abịa na njedebe, ma ọ bụrụ na nkwubi okwu a sitere n'aka ihe nrite nke mba asaa na-aga nke ọma.
Ya mere enwere ike ikwu na okwu ndị a Carmen Mola gbara n'ajụjụ ọnụ ajụjụ ọnụ bụ amụma: “Enweghị m ihe mere m ga -eji jiri ọchịchọ obi kpughee onye m bụ, n'agbanyeghị na anyị nwere ike tinye ego efu na nlele; Ọ ga -akara m mma ma ọlị ịtụle ohere a ”. Ihe kpatara ya ...
Ma ọ bụrụ: nnyefe nke Onyinye mbara ala 2021 bụ ngọpụ zuru oke maka otu enigmas edemede kachasị ukwuu n'ime afọ iri gara aga ịpụta. N'azụ Sergio López (pseudonym) na de ya Obodo oku, bụ mkpịsị odee nke Carmen Mola, na n'azụ amamihe ya - iji nwee ike nweta ego nrite - uche nke Antonio Mercero, Jorge Díaz na Agustín Martínez.
Dịkwa mma, ugbu a ị ghọtara ihe kpatara ya N'ajụjụ ọnụ ọzọ site na email, Mola dere, sị: "Ekwetara m na ọ bụ ihe niile ka m ghara ụgha." O kwesịrị ka a na -ege ya ntị.
Banyere ndị dere Carmen Mola
Inye onyinye a abụghị ihe ndabakọ, ọ bụghịkwa ihe ịga nke ọma onye ode akwụkwọ akụkọ ifo nwetara n'ime afọ anọ ọ dịrị ndụ. Nke a bụ nchịkọta nke akwụkwọ edemede nke ndị ode akwụkwọ nrite mmeri:
Ọ bụ onye edemede nwere ogologo ọrụ - nke mbụ n'ime atọ ahụ,, onye akwụkwọ akụkọ dị ka Ikpe ziri ezi nke ndị na -awagharị awagharị (2012) y Enwere m n'ime m nrọ niile nke ụwa (2017). Díaz pụtakwara dị ka onye edemede maka usoro telivishọn.
N'ime afọ, ọ bụ n'etiti mmadụ atọ nke ndị okike. Nakwa onye edemede, ọrụ ha pụtara ìhè Ndụ enweghị uche (2014) na Ọnọdụ ụmụ nwanyị Japan nwụrụ anwụ (2018). N'otu aka ahụ, onye odee dere nke ọma n'ime ụwa ndị na -akpa ọchị na aha ya Na violet (2018).
Ọ bụ ya bụ ọdụdụ otu, ọbụghị ma ọ dịkarịa ala nwere nka. Na mgbakwunye na ịbụ onye edemede - Site na ọrụ dịka Ugwu furu efu (2015) -, Ọ bụ onye edemede nke usoro, otu ihe ịga nke ọma Enweghị ara, enweghị paradaịs.
Otu onye ikpeazụ na -emeri
Paloma Sánchez-Garnica (1962) meriri n'ọkwa nke onye ikpeazụ Ụbọchị ikpeazụ na Berlin, nke nke e nyere aha ya Ofmụ iwe n'okpuru pseudonym Yuri Zhivago. Ọ bụ nkwanye ugwu kwesiri ekwesi, maka nnukwu ọrụ ya, yana maka atụmatụ na ntọala ya. Arụ ọrụ dịka:
Ezigbo arcanum (2006)
Ikuku ọwụwa anyanwụ (2009)
Mkpụrụ obi okwute (2010)
Ọnya atọ ahụ (2012)
Sonata nke ịgbachi nkịtị (2014)
Ncheta m siri ike karịa nchefu gị (2016, Fernando Lara award nke otu afọ)
Echiche nke Sofia (2019)
Ndị juri nke mbipụta 70 nke ihe nrite Planeta
Ndị juri a ma ama nke họpụtara ndị meriri n'asọmpi a bụ:
Belén López (onye isi nchịkọta akụkọ Planeta)
José Manuel Blecua (onye Spain na -ahụ maka ọdịmma mmadụ na agụmakwụkwọ)
Carmen Posadas (onye edemede)
Rosa Regàs (onye edemede)
Fernando Delgado (onye edemede)
Juan Eslava (onye edemede)
Pere Gimferrer (onye edemede)
Esemokwu dị n'ime ụwa nke akwụkwọ nwanyị tupu mkpughe nke njirimara Carmen Mola
Dịka m kwuru na mbụ, Carmen mola aghọwo òtù nzuzo n'afọ ndị na -adịbeghị anya n'ime ụwa nke thriller Akwụkwọ edemede Spanish. Nke a bụ mmetụta ya nke ndị otu ụmụnwaanyị ji wee kwado ya dịka onyonyo, ihe atụ dị ịrịba ama nke ihe atụ ị ga -eso. Institutelọ ọrụ ụmụ nwanyị agbakwunyerela ọrụ ya na ngalaba “ịgụ nwanyị”, oghere nke ya na ndị dere ogo Irene Vallejo na Margaret Atwood na -ekerịta.
Agbanyeghị, yana ihe kpatara ị ga -eji hapụ ya, mgbe o kpughere ezi njirimara nke akụkọ ifo, akara ngosi ahụ dara maka ọtụtụ ndị nnọchi anya nwanyị nwanyị Spain. Banyere nke a, Beatriz Gimeno - onye edemede, nwanyị na onye nwere ọkwa onye isi ụlọ ọrụ ụmụ nwanyị n'oge ahụ - bipụtara na profaịlụ Twitter ya: “Ewezuga iji aha nwanyị, ụmụ nwoke a na -aza ajụjụ ọnụ afọ. Ọ bụghị naanị aha, ọ bụ profaịlụ ụgha nke o jiri ndị na -agụ ya na ndị nta akụkọ were ya. Ndị aghụghọ ”.
N'aka nke ọzọ, ụlọ ahịa akwụkwọ Madrileia Mujeres & Compañía O kwuru, sị: “Onyinye anyị nyere hashtag Carmen Mola, mana ọ bụ Mola karịa ka ndị nwe obodo anaghị etinye ya niile. #CarmenMola ". Mgbe ahụ: ha wepụrụ nbipụta niile nke akwụkwọ akụkọ ifo na shelf ha.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akwụkwọ ndị dị ugbu a » Akwụkwọ » ọtụtụ » Nrite Planet 2021: nke kacha ọhụrụ na nke na -adịghị ahụkebe na akụkọ ntolite niile